ဘာကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာ လိုအပ်သနည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home လေ့လာခြင်း သင်းအုပ် အသင်းတော် ဩဝါဒ ဘာကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာ လိုအပ်သနည်း
ဘာကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာ လိုအပ်သနည်း
Samuel Soe lwin 7:27:00 AM လေ့လာခြင်း, သင်းအုပ်, အသင်းတော်, ဩဝါဒ,
အသင်းတော်အကြောင်းပြောလိုက်သည်နှင့် လူတို့၏ အကြည့်များက ဟိုမှသည်မှ စူးစိုက်ကြည့်မှုကိုခံရသည့် နည်းတူ၊ အများစုသောသူတို့သည် အသင်းတော်နှင့်စပ်ဆိုင်လျင် အလေးအနက်ထားလျက် စဉ်းစားမှုကို သိပ်ပြီး ဦးစားမပေးလိုကြသည်ကို ယနေ့ခေတ်တွင် မြင်တွေ့နေရသည်။
စသည်တို့ကို အကြောင်းပြုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုရာတွင် မည်သို့သောသူများက ဝမ်းမြောက်လျက် စိတ်ဝင် တစား ရှိကြပါသနည်း။ အမှန်စင်စစ်အားဖြင့် အသင်းတော်ဟူသည် ဘုရင်တကာတို့၏ ဘုရင်ဖြစ်သော ယေရှုခရစ်တော် ဘုရား၏ မဟာစီမံကိန်းတွင် ပျောက်ဆုံးသူများကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိလာစေခြင်း (သို့) ယုံကြည်သူများအား တပည့်တော်ဖြစ်စေခြင်းစသော မဟာစေခိုင်းချက်များပြုမူဆောင်ရွက်ရန် အသင်းတော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အသင်းတော်ဆိုသည်နှင့် အသင်းတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သော “သင်းအုပ်ဆရာ” သည်မဖြစ် မနေဆွေးနွေးစရာအကြောင်းဖန်လာရပါလိမ့်မည်။
ထိုသို့သောအတွက်ကြောင့် ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်းအုပ်ဆရာကို လိုအပ်ကြပါသနည်းဆို၍ ဆွေးနွေးမှု များကိုအောက်ပါအတိုင်း အကြောင်းအရာ (၃) ခုဖြင့်ဆွေးနွေးလိုပါသည်။
၁။ နှုတ်ကပတ်တော် ယူဆောင်လာပေးခြင်း။
သင်းအုပ်ဆရာကို ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါသနည်းဆိုရာတွင် ခရစ်တော်ဘုရား၏ မဟာစေခိုင်းမှုနှင့် အတူ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သယ်ဆောင်လာပေးရန်အတွက် သင်းအုပ်ဆရာကို ကျွန်ုပ်တို့အမှန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြု ရန်မှာ သင်းအုပ်ဆရာ၏ အဓိကအငန်းအတာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်တော်ဘုရားက နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဖွင့်ပြခဲ့ရာ၌ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်....
(၁) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေခြင်း (ယော၊ ၂၀:၃၀)။
(၂) ကျေးဇူးတော်၌ကြီးရင့်စေခြင်း (တမန်၊ ၂၀:၃၂)တို့ကိုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ထိုနည်းတူ သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ကယ်တင်းခြင်း” နှင့် “ကြီးရင့်ခြင်း” တို့ဖြစ်လာစေရန် နှုတ် ကပတ်တော်ကို သယ်ဆောင်လျက် ဟောပြောသူများဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အမှန်လိုအပ်ပါသည်။
“ထိုသို့ဘုရားသခင်၏ ပညတ္တိကျမ်းစာကို သေချာစွာ ဘတ်ရွတ်၍ အနက်ကိုပြန်သဖြင့်၊ လူများ နားလည်စေ ခြင်းငှါ ပြုကြ၏” (နေဟမိ၊ ၈:၈)။ ဓမ္မသစ်တွင်လည်း ထိုသို့သော တာဝန်ကို တိမောသေနှင့် တိတုအား ရှင်ပေါလုမှ အတိအလင်းခန့်အပ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရပါသည် (၂ တိ၊ ၂:၂၊ တိတု၊ ၂:၁၅)။
ထို့ကြောင့် ဘာကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာကို ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ရပါသနည်းဆိုလျင် သင်းအုပ်ဆရာသည် “နှုတ်က ပတ်” တရားတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား “ကယ်တင်ခြင်း” နှင့် “ကြီးရင့်ခြင်း” အသက်တာကို ပို့ဆောင်ပေးရန် ဟောပြောသူ များဖြစ်သော ကြောင့် ဟု ဖြေဆိုရပါလိမ့်မည်။
၂။ ခရစ်တော်နှင့်အတူ လျောက်လှမ်းရန် အားပေးခြင်း။
ဒုတိယအနေဖြင့် သင်းအုပ်ဆရာကို ကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့် လိုအပ်ရသနည်းဆိုလျင် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လျောက်လှမ်းအသက်ရှင်ရန် အားပေးတည်ဆောက်မှုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်သည်ဟုဆိုရသည်။ ဧဖက်၊ ၆:၂၁ တွင်ကြည့်ပါက “သင်တို့သည် ငါ၌ဖြစ်သော အကြောင်းအရာများကို သိစေခြင်းငှါ၊ သခင်ဘုရား ထံ၌ သစ္စာရှိသော ဆရာတည်းဟူသော ငါချစ်သောညီ တုခိတ်သည် အလုံးစုံတို့ကို သင်တို့အား ဘော်ပြလိမ့် မည်” ဟုဆို ထားပါသည်။
ထို့အတူ ရှင်ပေါလုမှ တုခိတ်အား ဧဖက်အသင်းတော်သို့ စေလွတ်ရခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်းဆိုထားပြန်သည် ကိုလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ “သင်တို့သည်ငါတို့၏အကြောင်းအရာများကို သိမည်အကြောင်းနှင့်၊ ထိုသူသည် သင်တို့ “စိတ်နှလုံးကို သက်သာစေမည်”အကြောင်း၊ ထိုသူကို သင်တို့ဆီသို့ ငါစေလွှတ်၏” (ဧဖက်၊ ၆:၂၂)။”စိတ်နှ လုံးကို သက်သာစေမည့်အကြောင်း” ဟုအတိအလင်းမြင်နိုင်ပါသည်။
ယုံကြည်သူများကို ခရစ်တော်မည်မျှချစ်တော်မူကြောင်းနှင့် ထိုသို့ချစ်တော်မူကြောင်းကို ယုံကြည်သူတို့အား အမြဲ အမှတ်ရစိမ့်သောငှါ သင်းအုပ်ဆရာသည် တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်း၊ တည်ဆောက်မှုပြုခြင်းများကို အစဉ်မပြတ် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်ကပ်လျက် ပြုကြသူများ ဖြစ်ပါသည် (ဧဖက်၊ ၄:၈-၁၁၊ ဖိ၊ ၁:၃၊ ကော၊ ၁:၉၊ ၂ သက်၊ ၁:၃)။
ထို့ကြောင့် သင်းအုပ်အဖြစ်ခေါ်ခြင်းခံရသူတို့သည် ယုံကြည်သူတို့၏အသက်တာအား ဘုရားကို အမြဲမျက် မှောက် ပြုလျက်သွားလာနိုင်ကြစေရန် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် အားပေးတည်ဆောက်လျက် ပြုကြရသူများ ဖြစ်သည်။
၃။ သာသနာအလင်းဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အားပြင်ဆင်ပေးခြင်း။
အရေးကြီးဆုံးဟုဆိုရမည်ဖြစ်သော သင်းအုပ်ဆရာ၏ နောက် တာဝန်တစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင့် သာသနာတော်တွင် “အလင်း” နှင့် “ဆား”ဖြစ်လာစေရန် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် သွန်သင်ခြင်း၊ လမ်းပြခြင်း၊ ပဲ့ပြင် ခြင်း၊ ပုံသွန်းခြင်းစသော အမှုများကိုပြုလျက် ခရစ်တော်၏ ကိုယ်အင်္ဂါ၌တည်ဆောက်မှုကို ပြုပေးခြင်း ဖြစ်ပါ သည် (ဧဖက်၊ ၃:၁၂)။
ထို့ကြောင့် သင်းအုပ်ဆရာ၏ တာဝန်မှာ အသင်းတော်တွင်းသာမက အသင်းတော်ပြင်ပ၌ပင်လျင် ဘုရားသခင့် အကြံအစည်တော်နှင့် အလိုတော်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်စေရန် ကြီးမြတ်သောအမှုများကို ပြုရ သောသူဖြစ်ပေသည်။
သာသနာ့အမှုသည် “သင်းအုပ်” သာပြုရမည့်အမှုမဟုတ် အားလုံးပြုကြရမည့် မဟာစေခိုင်းချက်ဖြစ်သော ကြောင့် ၁ ပေ၊ ၂:၉ တွင် “ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုး” ဟုအတိအလင်းဆိုထားပါသည်။
ထို့အတူ “ထိုနည်းတူ၊ သူတပါးတို့သည် သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ရှိတော်မူ သော သင်တို့အဘ၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းစေ ခြင်းငှါ၊ သူတပါး ရှေ့၌ သင်တို့အလင်းကို လင်းစေကြလော့” (မ၊ ၅:၁၆)ဆိုသည့်အတိုင်း ယုံကြည်သူတိုင်း ရှိသည့် နေရာတွင် ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရန်အမှုကို သင်းအုပ်ဆရာ သည် မွမ်းမံမှုများကို ပြုလျက် အစေခံနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သင်းအုပ်ဆရာဟူသည် သခင်ဘုရား၏အသင်းတော်တွင် အရေးပါလျက်ရှိသော ဘုရားသခင့်အစေခံများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။
ဘုရားသခင်နှင့်အတူသွားလာလျက် ဆက်ကပ်မှုပြုလျက် သာသနာ့အစေခံခြင်းသာမက ကျွန်ုပ်တို့ကို လည်း ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စိမ့်သောငှါလည်းကောင်း (သို့) ကြီးရင့်ခြင်းသို့ရောက်စိမ့်သောငှါလည်းကောင်း အစေခံမှုများကို နေ့ညမပြတ် နှုတ်ကပတ်တော်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းများကို ပြုနေကြရသူများဖြစ်ပါသည်။
ထို့အတူ ယုံကြည်သူတိုင်း အသီးအသီးခံစားကြရသော ဆုကျေးဇူး၌လည်း အစဉ် အတိုင်းကြီးရင့်လျက် သာသနာ့အလင်းများဖြစ်လာစေရန် မွမ်းမံ၊ တည့်မတ်ပေးလျက်ရှိကြသူများဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သင်းအုပ်ဆရာကို လိုအပ်လှပါသနည်းဟူသော မေးခွန်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ဘုရား သခင်ပေးထားသော သင့်အသင်းတော်ရှိ သင်းအုပ်ဆရာအတွက် ဘုရားသခင့်အား ယခုပင်ချီးမွမ်း လိုက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ Rev. Red Greco ၏ Why we need pastors? အား မြန်မာမူပြုပါသည်။
Tags # လေ့လာခြင်း # သင်းအုပ် # အသင်းတော် # ဩဝါဒ
by Samuel Soe lwin - 7:27:00 AM
Tags လေ့လာခြင်း, သင်းအုပ်, အသင်းတော်, ဩဝါဒ